24 Okwu Jehova wee ruo m ntị ọzọ n’afọ nke itoolu, n’ọnwa nke iri, n’abalị iri n’ọnwa ahụ, sị:
2 “Nwa nke mmadụ, dee aha ụbọchị a, ụbọchị taa. Eze Babịlọn eburuwo onwe ya dakwasị Jeruselem n’ụbọchị taa.+
3 Jiri ụlọ a na-enupụ isi+ tụọ ilu, kwuokwa banyere ha, sị,
“‘Nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru: “Sikwasị ite e ji esi nri nke nwere ọnụ obosara; sikwasị ya n’ekwú, gbanyekwa ya mmiri.+
4 Chịnyekwa anụ e beriri eberi n’ime ya,+ anụ ndị dị mma, ụtakụ ya na ọrụ aka ya; wụjuo ya ọkpụkpụ ndị kasị mma.
5 Ka e wetakwa atụrụ kasị mma,+ sonye nkụ gburugburu n’okpuru ya. Sie anụ ya e beriri eberi, siekwa ọkpụkpụ ya n’ime ya.”’”+
6 “Ya mere, nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, ‘Ahụhụ ga-adịrị obodo nke na-awụfu ọbara,+ ite e ji esi nri nke nwere ọnụ obosara, nke ime ya tara nchara, nke nchara ọ tara na-apụbeghị na ya! Wepụta ya otu otu;+ a gaghị efere ya nza.+
7 N’ihi na ọbara ya dị kpọmkwem n’etiti ya.+ Ọ wụsara ya n’elu nkume nke na-akwọ mụrụmụrụ. Ọ wụpụghị ya n’ala, ka o wee kpochie ya ájá.+
8 Iji mee ka m wee iwe wee bọọ ọbọ,+ awụsawo m ọbara ya n’elu nkume nke na-akwọ mụrụmụrụ, ka a ghara ikpochi ya ekpochi.’+
9 “Ya mere, nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, ‘Ahụhụ ga-adịrị obodo nke na-awụfu ọbara!+ Mụ onwe m ga-emekwa ka ikpo ya dị ukwuu.+
10 Sonye ya ọtụtụ nkụ. Menwuo ọkụ. Sie anụ ahụ ka o ghee nke ọma. Wụpụtakwa ofe ahụ, ka ọkpụkpụ ndị ahụ dịkwa oké ọkụ.
11 Buru ite ahụ ihe na-adịghị sikwasị n’ọkụ ka o wee dị ọkụ; ọla kọpa ya ga-acha ọkụ, adịghị ọcha ya ga-agbazekwa n’ime ya.+ Ka nchara ọ tara rechapụ.+
12 Nsogbu dị! Ọ na-agwụ ike, ma nchara dị ukwuu ọ tara adịghị apụ apụ n’ahụ́ ya.+ Tụba ya na nchara ọ tara n’ọkụ!’
13 “‘Omume rụrụ arụ dị n’adịghị ọcha gị.+ Ọ bụ ya mere m ji na-eme ka ị dị ọcha, ma ị hapụghị adịghị ọcha gị wee dị ọcha.+ Ị gaghị adị ọcha ọzọ ruo mgbe m mere ka iwe m na-eweso gị dajụọ.+
14 Mụ onwe m, Jehova, ekwuwo ya.+ Ọ ga-abịa,+ m ga-emekwa ihe. M gaghị eleghara ya anya,+ m gaghị eme ebere,+ m gaghịkwa agbanwe obi m.+ Ha ga-ekpe gị ikpe dị ka ụzọ gị niile na omume gị niile si dị,’+ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru.”
15 Okwu Jehova wee ruo m ntị ọzọ, sị:
16 “Nwa nke mmadụ, lee, m ga-anapụ gị ihe anya gị na-achọsi ike+ site n’iti gị ihe otiti,+ etikwala aka n’obi, akwakwala ákwá, anya mmiri apụtakwala gị n’anya.+
17 Sụọ ude, ekwula okwu. Erukwarala ndị nwụrụ anwụ uju.+ Kee ákwà isi gị,+ yinyekwa akpụkpọ ụkwụ gị n’ụkwụ gị.+ Ekpuchikwala afụ ọnụ gị,*+ erikwala nri mmadụ nyere gị.”+
18 M wee malite ịgwa ndị mmadụ okwu n’ụtụtụ, nwunye m wee nwụọ n’uhuruchi. M wee mee n’ụtụtụ dị nnọọ ka e nyere m n’iwu.
19 Ndị mmadụ wee na-agwa m, sị: “Ọ̀ bụ na ị gaghị agwa anyị otú ihe a ị na-eme si gbasa anyị?”+
20 M wee sị ha: “Okwu Jehova ruru m ntị, sị,
21 ‘Gwa ụlọ Izrel, sị: “Nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, ‘Lee, m ga-emerụ ebe nsọ m,+ bụ́ ike unu nke na-ebu unu isi,+ ihe anya unu na-achọsi ike+ nakwa ihe mkpụrụ obi unu na-enwere ọmịiko, ụmụ unu ndị ikom na ụmụ unu ndị inyom bụ́ ndị unu hapụrụ—ga-eji mma agha gbuo ha.+
22 Unu ga-emekwa dị ka m mere. Unu agaghị ekpuchi afụ ọnụ unu,*+ unu agaghịkwa eri nri mmadụ nyere unu.+
23 Ákwà isi unu ga-adị unu n’isi, akpụkpọ ụkwụ unu ga-adị unu n’ụkwụ. Unu agaghị eti aka n’obi, unu agaghịkwa akwa ákwá,+ unu ga-erekasịkwa n’ime njehie unu,+ unu ga-asụrụ ibe unu ude.+
24 Ezikiel aghọworo unu ihe àmà nke ihe ga-eme n’ọdịnihu.+ Dị ka ihe niile o mere si dị, otú ahụ ka unu ga-eme. Mgbe ihe a ga-eme,+ unu ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Onyenwe unu Jehova.’”’”+
25 “Ma gị onwe gị, nwa nke mmadụ, ọ́ bụghị n’ụbọchị m ga-anapụ ha ebe ha e wusiri ike, bụ́ ihe mara mma nke na-enye ha aṅụrị, ihe anya ha na-achọsi ike+ nakwa ihe na-agụsi mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ụmụ ha ndị ikom na nke ụmụ ha ndị inyom agụụ ike,+ ee,
26 ọ́ bụghị n’ụbọchị ahụ ka onye gbapụrụ agbapụ ga-abịakwute gị zie gị ozi?+
27 N’ụbọchị ahụ, ị ga-emeghere onye ahụ gbapụrụ agbapụ ọnụ gị,+ ị ga-ekwu okwu, ị gaghị agba nkịtị ọzọ;+ ị ga-abụkwara ha ihe àmà+ nke ihe ga-eme n’ọdịnihu. Ha ga-amarakwa na mụ onwe m bụ Jehova.”+